🥇 Akaụntụ na atelier
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 548
Video nke ajụjụ na atelier
Ordertụ ajụjụ na atelier
Atelier aza ajụjụ bụ akụkụ dị mkpa nke workflow. Njikwa pụtara ịkọ ajụjụ maka ndị ahịa na njikwa zuru oke na ndị ọrụ na ọrụ ha. Usoro kachasị mma maka ịza ajụjụ bụ, ndị ahịa ka ukwuu yana, n'ihi nke a, uru onye nwe ụlọ nwere. Onye ọchụnta ego na-aga nke ọma maara otu esi esochi onye na-azụ ha. Nnukwu nyocha dị elu na-ewere akpaaka nke usoro azụmaahịa, kọmputa na ịkọwapụta ọrụ, yana itinye aka na usoro ndekọ ego. Ihe niile a na-enye site na usoro amamịghe nwere akwụkwọ ndekọ agbakwunyere nke na-arụ ọrụ na-enweghị onwe ya na-enweghị enyemaka nke ndị ọrụ. Usoro dị otú a abụghị naanị onye inyeaka, kamakwa onye ọrụ nke na-emezu iwu na-enweghị ajụjụ na enweghị njehie.
Na ngwanrọ sitere na ndị mmepe nke USU, nke nwere njirimara niile dị n'elu, enwere akwụkwọ ndekọ na atelier, nwere ozi dị mkpa maka ọrụ na-aga nke ọma. Akaụntụ gụnyere ịchịkwa ndị ọrụ, ndị ahịa, iwu, usoro ego na akwụkwọ. Ihe a niile di n'otu ebe ma chebe ya site na sistemụ nchekwa a pụrụ ịdabere na ya. Usoro ahụ na-enye gị ohere ịme ndekọ nke atelier na Internetntanetị, ya bụ, remotely. Otu onye ọrụ adịghị mkpa ịbịa n'ọfịs iji mee mgbanwe ma ọ bụ nyochaa ozi achọrọ. Iji mee nke a, ọ dị ha mkpa ịbanye ngwa site n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ wee lelee ya nke ọma. Ha nwere ike ikpebi otu esi arụ ọrụ na ngwanrọ ahụ site na USU.
Onye ọchụnta ego nke na-akwụ ụgwọ nlezianya maka ịza ajụjụ na onye nwe ya anaghị enwe ụkọ ahịa na uru. Ọ bụrụ na a na-ahazi usoro ahụ, onye na-agba ọsọ na-agba ọsọ nke ọma. Site na ijikwa onye ndu na atelier, onye njikwa nwere ike ịtụle nsogbu sitere n'akụkụ dị iche iche wee dozie ha nke ọma dịka o kwere mee maka mmepe ụlọ ọrụ. N'ihi ọrụ nke nyochaa mmegharị ego, onye ọchụnta ego nwere ike ịhụ ebe ejiri akụ ya na ebe ọ ka mma iduzi isi obodo. A na-ahụ mmegharị ego niile nke onye na-ere ahịa na-ahụ maka njikwa ya na akwụkwọ ndekọ ihe maka ọdịmma dị ka eserese na eserese. Na sọftụwia ahụ, ịnwere ike ịlele ọnụọgụ uru nke uru, hụ mmefu na mbata, yana nyochaa ha ma họrọ usoro mmepe kachasị mma.
Site n'enyemaka nke tebụl ndị ọrụ, njikwa nwere ike nyochaa ọrụ nke ndị ọrụ na-ewepụta onwe ha, na-ahụ otu onye ọrụ ọ bụla si arụ ọrụ n'otu n'otu. Onye njikwa ahụ nwere ike ikpebi otu esi akwụghachi ndị kachasị mma ma nyere ndị ọrụ na-emezighị emezi aka ịga n'ihu. Accountkọwa ndị ọrụ dị ezigbo mkpa, n'ihi na ọ bụ ihe na-eme ka iwebata usoro ịmara nke ọma na ndị otu, nke na-eme ka njirimara ndị ọrụ rụọ ọrụ. Mgbe onye ọrụ gị maara ebumnuche ha nwere iji nweta nsonaazụ ma nata ụgwọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ dị elu, ma marakwa etu esi emezu ebumnuche achọrọ, ha na-anwa ime nke ọma karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na onye njikwa ahụ nwee ihe ịga nke ọma iji mezuo usoro a, ọrụ ndị ọrụ na-abụ obere nsogbu.
Akwụkwọ nke akwụkwọ ndekọ ego na-enye gị ohere ịnata akụkọ sitere n'aka ndị ọrụ na oge ma hụ nkwekọrịta niile ejiri ndị ahịa kwubie. Nke a na eme ka ọrụ nke isi nke ụlọ ọrụ ahụ dị mfe, na-echekwa oge na ike ha. Mara otú e si na-aza ajụjụ na atelier dị ka rụọ ọrụ nke ọma dị ka o kwere omume nke ụlọ ọrụ, njikwa ahụ ghọtara ihe mgbaru ọsọ na azum ga-agbaso maka ndị ibe eto.
N'okpuru ebe a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke atụmatụ USU. Ndepụta nke ohere nwere ike ịdị iche na-adabere na nhazi nke usoro mepụtara.
Ikpo okwu nwere akwụkwọ nke ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ, iwu, ihe ịkwa akwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa maka ọrụ nke atelier.
The mfe interface bụ na-atọ nke niile ndị ọrụ niile.
Onye njikwa ahụ nwere ike n'onwe ya ịhọrọ usoro mmemme, na-agbanwe agba nke windo na ndabere ọrụ.
Sọftụwia ahụ na - enye gị ohere idobe ọtụtụ akwụkwọ njikwa n'otu oge, na - arụ ọrụ n'otu oge.
Na ngwa ahụ, ịnwere ike ịrụ ọrụ na akaụntụ nke atelier na ịntanetị na site na netwọk mpaghara.
Usoro a juputara na ngwa ngwa ya na ndi ahia ya.
N'ime ngwanro a, ị nwere ike ijikwa mgbanwe na-ewere ọnọdụ na ngalaba ego nke atelier; nyochaa ike dị iche iche nke uru, mmefu na ego.
Usoro a na - enyere aka imezu ebumnuche ụlọ ọrụ n'ime oge ụfọdụ.
Lọ nkwakọba ihe na akụrụngwa ego nwere ike jikọọ na ngwa ahụ, nke na-enyere aka ibipụta akwụkwọ, ịkwụ ụgwọ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kpamkpam ọ bụla na-arụ nke atelier nwere ike ijikwa ihe omume, n'ihi na ya mfe interface na-akpan mfe maka ọrụ nke onye kọmputa niile etoju.
Enwere ike iji ikpo okwu ndị ateli, ụlọ ahịa mmezi, ngalaba ọrụ ubi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Usoro a na - agwa gị otu ị ga - esi debe ndị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ ma webata usoro iji mara ọrụ.
Ekele maka akwụkwọ njikwa, onye njikwa ahụ nwere ike nyochaa ọrụ nke ndị ọrụ nke ngalaba niile dị na obodo, mba ma ọ bụ ụwa.
Ngwa sitere na USU na-aza ajụjụ nke ndị ọrụ ma na-adụ ha ọdụ n'oge enweghị nghọta.
Ikpo okwu na-enye gị ohere izipu ndị ahịa ma ozi ịntanetị na ozi SMS, ma ugbu a onye ọrụ anaghị achọ iwepụta oge na-ezigara onye ahịa ọ bụla akwụkwọ ozi iche iche, n'ihi na sistemu ahụ nwere ọrụ nzipu ozi.
Site n'enyemaka nke ndekọ ụlọ nkwakọba ihe, onye njikwa ahụ nwere ike ijikwa nnweta ụfọdụ ihe dị mkpa iji dọọ ngwaahịa.
Mgbe ị wụnye ikpo okwu, ndị mmemme anyị nwere ike ijikọ ma onye nbipute na ọnụ POS na ngwanrọ sitere na USU, nke na-eme ka ọrụ ndị ọrụ rụọ ọrụ.